Puntlandtimes (Garoowe)-Bili-liqadii ugu xoogganayd ee lagu sameeyo hanti dowladeed ayaa ka socota magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland gaar ahaan xarunta telefishinka iyo Raadiyaha dowladda Puntland.
Xog hoose oo ay heshay Puntlandtimes ayaa sheegaysa in maamulka TV-ga oo gacan ka helaya shaqsiyaad ka agdhaw ay boob xooggan ku hayaan dhammaan hantida taal xarunta warbaahinta dowladda Puntland ee magaalada Garoowe, kadib xan ku aadan isbedel laga samayn doono oo soo baxday.
Ilo wareedyo aan magocooda qarinay ayaa Puntlandtimes u xaqiijiyey in agaasimaha xaruntu wato gaari laga iibiyey kharashka Tvga haseyeeshee aan loo diiwaangelin hanti dowladeed, waxaa kale oo la boobayaa kaydiyayaal, computero, camerada iyo agab kale oo xafiisku lee yahay.
Hantidhowrka guud ee dowladda Puntland oo booqday xafiiska ayaa waayey agab badan oo sanadkii hore u diiwaangashanaa, waxaana ay xanibeen dhammaan kharashaadkii tvga ee akoomada bangiga dowladda iyo xawaaladaha gaarka loo lee yahay.
Wacal beenlow ah. Wax aad sheegtid miyaad wayday.
Sida cinwanku u qoran yahay waxaan is iri hanti weyn ba la Boobay laakiin nasiib wanaag warku waxuu noqday in la xaday labo bisaddood iyo sadex joog ee ah dacas. Dowladu waa in ay sharciga hor geyso tuugta xadaysa bisadaha iyo dacaska qaran.
Musuq maasuq waa somali mehradeeda, ee puntland madax deeda wax ay xadaan ma waayine kkkkkk wariyoow warkaaga kulaabo waxna soo hubso
War bixintu run way noqon kartaa laakiin lama rumayn karo qoraalada puntlandtimes.Waayo ninka ka masuul ah puntlandtimes waa Faarax Gaylaan oo si aada puntlaan uga sheega wax jira iyo waxaan jirinba.Calaa kulli xaal wuu jiraa musuq-maasuq laakiin ma aqaan intuu le’eg yahay.
Isse Yusuf says:
Iftiimin buu wariyuhu sameeyay. Cadaymaheedana qofkii danaynayaa raadsanaya. Maxaa wanaag ah oo Macal iyo Xaaraan Jaan ay Puntland ka qabteen. Ducufo liidata oo ku fashilmay hoggaankii bay ku cadaadeen. Maalin dhaw dhegtaa dhiiga loo darayaa haddii Rabbi idmo
Illaa puntlaan loo helo madaxweyne garmaqaate ah oo tuugada xada maalka dadweynaha gacmaha jara ma daynayaan xatooyo xoolo dadweyne.
Jaalle Hilaac adigoo an cidna caayin oo dambaabin si asluub leh u soo rayi dhiibo.Waa wax aad u xun in la is caayaa.